November 17, 2017 · 7:45 AM EST
Zimbabwe President Robert Mugabe attends a university graduation ceremony in Harare, Zimbabwe, Nov. 17, 2017.
His his first public appearance since a military takeover, Zimbabwean President Robert Mugabe attended a university graduation ceremony Friday.
Government television showed Mugabe, the world's oldest head of state, at Thursday's talks standing smiling alongside army Chief Gen. Constantino Chiwenga.
Morgan Tsvangirai, a former prime minister and long-time opponent of Mugabe, told journalists in Harare on Thursday that Mugabe must resign "in the interest of the people."
Tendai Biti, who served as finance minister during the coalition government after the 2008 elections, called it "a very delicate time for Zimbabwe."
In Paris, the head of the African Union, Guinea's President Alpha Conde, warned Thursday that the continent "will never accept the military coup d'etat" in Zimbabwe and called for a return to the "constitutional order."
Meeting in Botswana, the SADC called for an emergency regional summit to help resolve the crisis, urging Zimbabwe to "settle the political challenges through peaceful means."
HarareZimbabweEmmerson MnangagwaRobert Mugabe